Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Doorka Mareykanka ee UNWTO cusub?
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Faallo • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Wararka Spain • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wtn
Way adagtahay in wasiirada dalxiiska ay u safraan Madrid dhamaadka bishaan si ay taariikh ugu sameeyaan UNWTO cusub. Waxaa laga yaabaa in si isku mid ah ay fursad u noqoto wadamada xubnaha ka ah UNWTO si ay u muujiyaan hoggaan ayna noqdaan hormuudka mustaqbalka iyo UNWTO cusub, haddii ay guryahooda joogaan ama ay u soo diraan safiir si uu u qabto shaqada wasiirka dalxiiska ee Golaha Guud ee UNWTO ee soo socda ee Madrid November. 28 - Diseembar 3.
Maraykanka, Ustraaliya, iyo Boqortooyada Ingiriiska ayaa ah quwadaha ugu waaweyn ee dalxiiska adduunka, laakiin aan xubin ka ahayn Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO).
Wakiilo, la-taliyeyaal qaali ah iyo khubaro kale oo ka socda dalalkan ayaa UNWTO iyo hay'ado la shaqeeya u shaqaaleysiiyay la-talin, cilmi-baaris iyo shaqooyin kale, halka dalalkoodu aysan bixin wax kharash ah oo xubinnimada.
Qaab-dhismeedka cusub ee UNWTO ma ku soo celin karaa Maraykanka iyo quwadaha kale ee adduunka ee dalxiiska inay dib ugu soo celiyaan hay'adda Qaramada Midoobay ee xiriirka la leh xubno lacag siiya?
Maraykanku wuxuu ahaa xubin aasaasi ah oo UNWTO ah. Si uu Maraykanku wali saamayn wayn ugu yeesho Ururka Dalxiiska Adduunka iyo Dalxiiska Adduunka guud ahaan, laakiin bixin la'aanta khidmadda xubinnimada waxay keentay in UNWTO ay noqoto mid aan khusayn, dhaqaale ahaan xasilloon, iyo ka yaraanshaha hoggaamiye ixtiraam leh qaybta dadweynaha ee dalxiiska adduunka.
Maalinta Dalxiiska Adduunka 2016, foWasiirkii hore ee dalxiiska ee Zimbabwe, Dr. Walter Mzembi, ayaa u sheegay eTurboNews"Maalinta Dalxiiska Adduunka ee 2016, waxaan ka buuxaa fikrado."
Mzembi waxa ay doonaysay in gobol kasta iyo dhul kasta oo Maraykan ahi uu si madax bannaan ugu biiro UNWTO. Iyadoo la tixgelinayo gobol kastaa wuxuu horeyba ugu madax-bannaanaa suuq-geynta dalxiiska gudaha iyo dibedda Mareykanka, fikraddaani ma ahayn mid caqli-gal ah.
"Waxaa laga yaabaa in tani ay tahay xalka ugu weyn ee dalxiiska adduunka, Mareykanka, si uu si rasmi ah ugu biiro Ururka Dalxiiska Adduunka ee Qaramada Midoobay (UNWTO). Xalku wuxuu noqon karaa 50 xubnood oo cusub oo ku biiraya UNWTO, hal gobol markiiba,” Mzembi ayaa u sheegay eTurboNews.
Habkan ka baxsan sanduuqa ayaa waxaa kala hadlay Safiirka Maraykanka Harry K. Thomas, Jr., iyo Dr. Walter Mzembi, oo ah musharaxa aan caddayn ee Xoghayaha Guud ee UNWTO 2017 markii uu u ololeynayay Xoghayaha Guud ee hadda Zurab Pololikashvili .
UNWTO waxay sii waddaa la wadaaga xogta, cilmi-baarista, iyo arrimaha kale ee Maraykanka iyo dalal badan oo aan xubin ka ahayn iyada oo aan wax lacag ah laga qaadin. Tani dabcan maaha mid waara.
Bishii Juun 2019, wararka xanta ah ayaa bilaabmay ee ku saabsan in Maraykanku dib ugu biirayo Ururka Dalxiiska Adduunka. Tan waxaa si degdeg ah u diiday Isabell Hill, Agaasime, Xafiiska Socdaalka iyo Dalxiiska Qaranka ee ku yaala Waaxda Ganacsiga ee Mareykanka, laakiin daaha gadaashiisa, hawluhu waxay u muuqdeen kuwo horumar ka gaadhay arrintan.
Tani waxay ahayd Oktoobar 2019, 6 bilood ka hor COVID-19 wuxuu burburiyay dalxiiska. Waxa sidaas ku dhamaatay maamulkii Trump ee Maraykanka.
Heshiiskii Cimilada ee Paris, heshiiskii Nukliyeerka Iran, Iskaashiga Trans-Pacific, UNESCO - kuwani waa dhammaan heshiisyada caalamiga ah ama hab-maamuuska Mareykanka uu ka baxay tan iyo markii Madaxweyne Trump uu dhaqan galiyay ajandihiisa "America First" bilawga xilliga ugu horreeya.
Sannadka 2019, Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibedda Kevin E. Moley ayaa kulan kula yeeshay magaalada Madrid saraakiil ka socda UNWTO si ay u sii wadaan wadahadallo ku saabsan ku biirista Mareykanka.
Bishii Juun 2019, a Wafdiga Aqalka Cad ayaa ka qeyb galay shirka Golaha Fulinta ee ururka ee Baku, Asarbayjaan Isla markaana, ujeedka Maraykanku uu dib ugala xaajoonayo xubinnimada ayaa lagu dhawaaqay. "America First macnaheedu maaha Ameerika oo keliya," Ku xigeenka madaxa shaqaalaha ee Aqalka Cad ayaa laga soo xigtay isagoo leh.
Bishii Juun 2019, markii rajada ku biirista "shuruudaha faa'iidada u leh Mareykanka" markii ugu horreysay lagu dhawaaqay, Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa soo saartay bayaan ay ku leedahay "Maamulka wuxuu rumeysan yahay in UNWTO ay bixiso awood weyn oo lagu shido kobaca qaybtaas, abuurto Shaqooyin cusub oo loogu talagalay dadka Mareykanka ah, waxayna muujinayaan baaxadda iyo tayada aan isbarbardhigga ahayn ee meelaha loo dalxiis tago ee Mareykanka."
Qaramada Midoobay ayaa wakhtigaas ku faraxsanayd rajada uu Maraykanku dib ugu soo biiray. War qoraal ah oo la soo saaray 2019, Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili wuxuu yidhi, "Aad ayay u dhiirigelinaysaa in Maraykanku uu si cad u muujiyay rabitaankiisa ah inuu dib ugu soo laabto UNWTO oo uu taageero dalxiiska oo ah darawal muhiim ah oo shaqo abuurka, maalgashiga, iyo ganacsiga, iyo ilaalinta dabiiciga ah. iyo dhaxal dhaqameedka adduunka oo dhan."
Awoodaha kale ee dalxiiska ee aan si gaar ah xubin uga ahayn UNWTO waxaa ka mid ah UK, Canada, iyo Australia. Halka ummadahaasi ay uga baxeen sababo kala duwan, kormeer la’aan iyo aqoonsiga xuquuqul insaanka ee golaha la talinta ayaa marar badan lagu dhaleeceeyay ururka.
The Ururka Dalxiiska Adduunka waxay u baahan tahay awoodahan waaweyn ee dalxiiska inay xubno ka noqdaan. Tani kaliya maaha lacagta xubinimada ee degdega ah ee loogu baahan yahay, laakiin sidoo kale in la ilaaliyo mawqif kasta oo caalami ah oo loogu talagalay waaxda dadweynaha dalxiiska adduunka.
Iyadoo ay jiraan khaladaad badan oo ka dhex jira hoggaanka hadda ee UNWTO, oo COVID-19 uu ku riixayo dalxiiska caqabadaha ugu weyn ee abid, rajada ku biirista Mareykanka ayaa noqonaysa mid fog - mise maya?
Isabel Hills, oo aan ahayn kaliya Agaasimaha Xafiiska Socdaalka iyo Dalxiiska Qaranka, Waaxda Ganacsiga, Mareykanka, laakiin sidoo kale Guddoomiyaha Ururka Iskaashiga Dhaqaalaha iyo Horumarinta (OECD) Guddiga Dalxiiska, waxay si buuxda u heli kartaa dhammaan dukumeentiyada iyo cilmi-baarista UNWTO, in kasta oo Mareykanka oo aan xubin ka ahayn, uusan bixineynin kharashka xubinnimada ee degdegga ah ee UNWTO 10kii sano ee la soo dhaafay.
OECD waa gole ay dawladuhu isbarbardhigaan oo ay isku waydaarsadaan khibradaha siyaasadda, ay ku aqoonsadaan dhaqamada wanaagsan marka la eego caqabadaha soo baxaya, korna u qaadaan go'aamada iyo talooyinka si loo soo saaro siyaasado wanaagsan oo nolol wanaagsan lagu gaaro.
Hadafka OECD waa horumarinta siyaasadaha hagaajinaya wanaagga dhaqaale iyo bulsho ee dadka adduunka oo dhan.
Iyadoo dalxiiska lagu baranayo sida loogu shaqeeyo COVID, Saudi Arabia iyo Spain waxay bilaabeen dhaqdhaqaaq cusub waxayna mar horeba Maraykanka keeneen isku dhafkan. Hoggaanka Sucuudiga, Isbahaysiga Dalxiiska ee Dalxiiska ee Daneeyayaasha badan ee Waddamada badan ka socda, ee COP26 ee Glasgow horaantii bishan ayaa la sameeyay.
Ma laga yaabaa inay jirto fursad hindisahan cusub lagu biirin karo UNWTO cusub? Haddii hindisahan lagu biirin lahaa UNWTO cusub oo hoggaan cusub hoos imanaysa, waxaa jirta fursad macquul ah oo dhammaan quwadaha dalxiiska adduunka ay mar labaad ku biiri karaan ururkan dalxiiska.
Tilmaanta ka-qaybgalka ee noocan oo kale ah ayaa hore iyo marar badanba ay sameeyeen dalalkii aasaasay hindisahan cusub.
Horumarkan cusub ayaa mar kale xaqiijinaya muhiimadda ay leedahay shirka Golaha Guud ee UNWTO ee soo socda si ururka loogu dejiyo waddo cusub.
Fursada ah in wasiirada dalxiiska ee wadamada xubnaha ka ah UNWTO ay u safraan Madrid dhamaadka bishaan oo ay ka qeybgalaan shirka loo dhan yahay ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii adkeyneysa.
Golaha loo dhan yahay wuxuu noqon karaa kulan ay ku kulmaan safiirada Madrid fadhigoodu yahay oo ay ka faa'iidaysanayaan tiro yar oo dalalka xubnaha ka ah. Tani ma keeni karto tirada codadka lagama maarmaanka ah waxayna ku qasbi kartaa kalfadhi kale waqti dambe.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim u ah wadamada xubnaha ka ah UNWTO iyo wasiiradoodu inay fahmaan muhiimada xaflada.
Guddoomiyaha ATB Cuthbert Ncube & Hon. Xoghayaha Dalxiiska Kenya Najib Balala
Cuthbert Ncube, Gudoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika, ayuu u sheegay eTurboNews Maanta oo uu booqasho rasmi ah ku tagay Senegal, "Guddiga Dalxiiska Afrika waxa uu ku talinayaa in Afrika la midoobo oo ay isugu timaado Madrid si ay uga qaybgalaan Shirka Guud ee UNWTO."
Waa kuwan waxa dhici kara haddii Xoghayaha Guud ee hadda aan lagu xaqiijin Shirka Guud ee UNWTO ee soo socda ee Madrid Diseembar 3, 2021:
Golaha loo dhan yahay ma qaadan doono talada ay u soo jeediyeen Golaha Fulinta ee jagada Xoghayaha Guud ee Ururka.
Waxay faragelin doontaa Golaha Fulinta in kalfadhiga 115aad ee lagu qabto Madrid, Spain, Diseembar 3, 2021, si loo furo hannaan cusub oo doorashada Xoghayaha Guud ee Ururka.
Waxa ay faraysaa Golaha Fulinta in hannaanka doorashada uu yahay ugu yaraan 3 bilood iyo ugu badnaan 6 bilood, laga bilaabo maalinta la furayo hannaanka doorashada.
Waxa ay faraysaa Guddoomiyaha Golaha Fulinta iyo Xoghayaha Guud ee Ururka in ay isugu yeedhaan 116 xubnood ee Golaha Fulinta iyo Shirweyne aan caadi ahayn bisha Maajo 2022 oo lagu qabto meel iyo tariikhda la cayimi doono.
Haddii Xoghayaha-guud ee hadda jira aan dib loo xaqiijin karin shirka Golaha Guud ee soo socda, waxaa laga yaabaa inuu helo fursad kale oo uu ku galo tartan cadaalad ah oo cusub jagadan.
Si kale haddii loo dhigo, waxaa iman doonta doorasho cusub oo xalaal ah oo loo ogolaan doono murashaxiin cusub inay u tartamaan oo u ololeeyaan jagadaas.
Dad badan ayaa yiraahda, tani ma dhicin Janaayo 2021, markii Golaha Fulinta uu dib u doortay Zurab Pololikashvili.
Dad badan ayaa aaminsan in tani ay noqon karto wadada ugu wanaagsan ee mustaqbalka ee UNWTO iyo Dalxiiska Adduunka. Sidoo kale waa dariiqa ugu wanagsan ee xubnaha cusub ee iman kara, sida Maraykanka iyo 10-ka waddan ee hadda ku soo biiray hindisaha caalamiga ah ee ay hormuudka ka yihiin Sucuudiga iyo Isbayn si ay u noqdaan kuwa dhaqaajiya berri cusub oo ka wanaagsan Ururka Dalxiiska Adduunka.
Waxa laga yaabaa inay xataa dhaxal wanaagsan u samayso Xoghayaha Guud ee UNWTO ee hadda.
Wasiirada UNWTO (Ergada) ee qorsheynaya inay ka qeybgalaan shirka loo dhan yahay ee ka dhacaya Madrid Noofambar 28 - Diseembar 3 ayaa laga yaabaa inay taariikh u sameeyaan dalxiiska adduunka.
Ka maqnaanshaha Golaha Guud waxay la macno noqon kartaa fursad luntay oo waddan noocaas ah uu ka maqan yahay dhacdadan muhiimka ah.
Yaa ka maqnaan doona Golaha Guud waa eTurboNews wariyayaal. Febraayo 2018, eTurboNews si sharaf leh ayuu u sheegay magacaabista Marcelo Risi isagoo ah Sarkaalka Sare ee Warbaahinta ee UNWTO.
Marcelo ayaa sheegay eTurboNews Bishii Febraayo 2018 markii la waydiiyay sababta jawaabaha UNWTO aysan u ahayn kuwa joogto ah oo adag, jawaabtu waxay noqotay: "Waxaa jira xeer cusub oo habraac ah iyo oggolaansho."
Hadda isla Marcelo Risi ayaa lagu amray inuu galo liiska madow eTurboNews oo ka socda UNWTO-da hadda jirta, oo ku qasbaysa eTurboNews si loo sameeyo qabanqaabo kale oo si wax ku ool ah loo daboolo Golaha Guud ee muhiimka ah.